दैनिक एउटा अमला खानुका यस्ता छन् अचम्मैको फाइदाहरु हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
कार्तिक १९, २०७७ बुधबार 1
तपाईं हाम्रो बारीमा पाइने अमला निकै नै भि’टामिनले भरि’पुर्ण फल हो । जसको निय:मित सेवनले तपाईंको स्वास्थ्यमा आउने विभिन्न समस्या हटा:उन मद्दत गर्छ । अध्ययन अनुसार एउटा अमलामा ६ सय मिलि ग्राम भिटा’मिन सी पाइन्छ ।
भि’टामिन सीका अन्य स्रोत जस्तै कागती वा सुन्तला हावा वा घामको सम्प’र्कमा आएपछि यसमा पाइने भिटामिन सी कम हुन्छ तर अमला एउटा यस्तो स्रोत हो जसमा भि’टामिन सी सधै रहिरहन्छ ।अमला खाँदाका फाइदै फाइदा
तौल कम : अमला खाँदा शरिरमा मेटा’बोलिजम बढ्छ र तौल निकै तिब्र रुपमा कम हुन थाल्छ ।
मुटुको समस्या : यो खाँदा नराम्रो कोलेस्ट्रो:लको स्तर कम हुन्छ र हृदय रोगबाट बच्न सह’योग गर्दछ ।
कमजोरी : अमलामा भिटामिन सीको मात्रा अ’त्याधिक हुने भएकाले तपाईंको शरिरलाई ऊर्जा’वान् राख्न सहयोग गर्दछ । यसले क’मजोरी पनि टाढा राख्छ ।
पाचन : अमलामा फा’इबर हुन्छ जसले पाचन प्रक्रिया’लाई सन्तुलनमा राख्छ । यो खाँदा कब्जियतको स’मस्या हट्छ ।
अनुहारमा चमक : यो खाँदा शरिरको टक्सिन टाढा रहन्छ र अनुहारको च’मक बढाउन सहयोग गर्दछ ।
क्यान्सर : अमलामा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टले कार्सिनोजेनिक सेल्स’लाई बन्न रोक लगाउँछ जुन क्यान्सरबाट बचाउनका लागि फाइदा’जनक मानिन्छ ।
राम्रो कपाल : यसमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टले कपाल चम्कि’लो बनाउने र कपाल झर्ने समस्या’बाट पनि मुक्ति दिन्छ ।-खबरहब
बिहान खाली पे’ट पानी पिउनुका ९ आश्चर्यजनक फाइदा पानी पिउदा पनि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ र अधिकांश रो’ग पे’टमा नै उत्पन्न हुन्छन् त्यसैले खाली पे’टमा पानी खानुको अर्थ धेरै छ। यसको प्रमुख फाइदा पे’ट स्वस्थ बनाउनु हो। खाली पे’ट पानी खादा स्वा’स्थ्यमा फाइदा हुने तथ्य सर्वप्रथम जापानमा प्रमाणित भएको हो।
प्राय जापानीले बिहान उठ्नेवित्तिकै चार गिलास पानी खान्छन्। पानी खाएको आधा घन्टापछि मात्र ब्रेकफास्ट लिन्छन्। यो वाटर थेरापीले उनीहरुलाई सक्रीय र स्वस्थ रहन मद्दत गरिरहेको छ। खाली पे’ट पानी खाँदा करिब ९० प्रतिशत रो’गबाट बच्न सकिन्छ। यसमा पनि मनतातो पानी उपर्युक्त हुन्छ।
आन्द्रामा फ्लस खाली पे’ट प्रशस्त पानी खादा पे’टका विकार शौचमार्फत जाने र पे’ट सफा हुन्छ। यसले पाच’न प्रणालीलाईपनि सहयोग गर्छ। तपाईलाई एक बिहानै शौच आउदैन भने कम्तिमा दुई गिलास मन तातो पानी खाली पे’ट खाँदा खुलेर शौच आउछ।
शरिरका विकार फालिदिन्छ तपाई बाथरुम जाँदा शरिरका उत्ते”जित र विकारलाई बाहिर फालिदिनुुहुन्छ। जतिधेरै पानी पिउनुहुन्छ त्यति धेरै विकार शरिरबाट फाल्न सहयोग पुग्छ। भोक बढाउछ नियमित खाना खानु महत्वपूर्ण हुन्छ। तर भोक लागेन भने के गर्ने?
खाली पे’ट पानी पिउदा तपाईको भोग जाग्छ। बिहान उठ्ने वित्तिकै खाली पे’टमा दुई गिलास पानी पिउनुहोस तपाईलाई भोक लागिरहन्छ। टाउको दुख्नबाट बचाउछ मानिसलाई बारम्बार
टाउको दुख्नुको मुख्य कारण प्रर्याप्त पानी नपिउनु हो।
डिहाइड्रेसनको मुख्य लक्षण नै टाउको दुख्नु हो। तसर्थ बिहान उठ्नेवित्तिकै पानी खानु भयो भने यो समस्याबाट मुक्ती मिल्छ। टाउको दुख्नबाट बचाउनको अतिरिक्त यसले श्वासको दुर्गन्ध र अन्य व्या’क्टेरियाको संक्रमणबाट जोगाउछ।
Prevकुनै कदम चालेको शंका मात्रै भयो भने त्योभन्दा कडा कदम चाल्छु…प्र.म ओलि !
Nextझाडापखला निको पार्नेदेखि क्यान्सर लाग्न नदिने अम्बाको पात बहुउपयोगी…हेर्नुहोस ।(प्रयोग गर्ने तरिका सहित)